News Collection: पारसलाई सजाय कि उपचार ?
पारसलाई सजाय कि उपचार ?
वसन्तराज कुँवर - लागूऔषधको कुलतमा परेकाहरूले सानाठूला अपराध गरेकै हुन्छन्, त्यसैले नसाको सुरमा गरेको हर्कतका लागि पारसलाई सजायभन्दा पनि उपचार तथा पुनस्र्थापनाको आवश्यकता छ
जबजब शासक परिवारमा 'ड्रग्स' प्रवेश गर्दछ, त्यसपछि त्यसको पतन सुरु हुन्छ । इराकमा सद्दाम हुसेनको पतनमा उनको छोरो उदयको ड्रग्स सेवन गर्ने बानी र उग्रव्यवहारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो । स्थिति यस्तो आयो कि सद्दाम हुसेनले नै आफ्ना छोरालाई कैद गर्नुपर्‍यो । नेपालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका छोराले ड्रग्स खाएकै कारण वंशविनाश भएको मानिएको छ । रक्सीलाई ड्रग्स नमानी गरिएका गल्तीले ठूलाठूला शासन र शक्तिमा ग्रहण लागेको पाइन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको परिवारमा पारसको 'लठ्याउने कुरा' सेवन गर्ने आदतले त्यो परिवारलाई पतन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो नै, हालको घटनाले त्यो क्रम अझै थपिएको देखिएको छ ।नेपालको राजपरिवारका सन्तती, चाहे छोरा हुन् वा छोरी, उनीहरू ड्रग्समा पर्न पुगे । रक्सी, बियरलगायत विभिन्न प्रकारका लठ्याउने चिजवस्तुहरू राजपरिवारले देश तथा विदेशमा रहँदा लिने गरेका प्रमाण प्रशस्त पाइएकै हुन् । बेलायतमा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा यस परिवारका सदस्यलाई ड्रग्सको आदत पर्ने राम्रो अवसर मिल्यो । नेपालको राजतन्त्र मासिनुमा राजपरिवारका नयाँ पुस्ताले लिने गरेको ड्रग्सको सोही आदतले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो ।
दरबारमा हुर्किएका सदस्यमध्ये पारस शाह पनि सानैदेखि ड्रग्समा परेको चर्चा चलिरहेकै हो । उनले नसाको सुरमा विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा हातहतियार चलाउनुका साथै झैझगडा गरेका र दुर्घटनामा परेको पनि देखिएकै, सुनिएकै हो । पारससँग नजिक भएकाहरूको भनाइअनुसार उनी व्यक्तिगत जीवनमा सोझो र भलाद्मी प्रकारको व्यवहार गर्छन् । जबजब उनले लठ्याउने चिजवस्तु लिन्छन्, त्यसपछि मात्र उग्र भएर ध्वंसात्मक कामकारबाही गर्छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने पारस जब ड्रग्स (रक्सीलगायत लठ्याउने कुरा) लिन्छन्, त्यसपछि मात्र उनी चेतनशील अवस्थाबाट अर्धचेतन अवस्थामा पुग्छन्, र सही निर्णय गर्न नसकी भयानक गल्ती गर्दै हिँड्छन् । यस अवस्थामा के बुझिन्छ भने पारसबाट हुने गल्तीहरू पारसका कारणले भन्दा पनि नसाको प्रभावका कारणले हुने गर्दछन् । केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री बलबहादुर के.सी.ले पनि रक्सीको नसामा गलत क्रियाकलाप गरेको कुरा छापामा आयो । हाम्रो समाजमा ८० प्रतिशत अपराधका घटना प्रायः नसाका कारणले हुन्छन् भन्ने पनि तथ्यांकबाट देखिएको छ । जहाँसम्म पारसले सुजाता कोइरालाका ज्वाइँछोरीमाथि हतियार प्रयोग गरेको भन्ने कुरा आएको छ, त्यसमा जति सत्यता छ, त्यो नितान्त रूपमा रक्सीको नसाको सुरमा गरिएको हो भन्ने जोकसैले पनि बुझ्न सक्ने कुरा हो । भलै ती दुई परिवार राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी होलान्, जसका कारण उनीहरूबीच तुस उब्जिएको हुनसक्छ । तर, जुन हदसम्मको गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप पारसबाट भयो, त्यो अवस्था आउनुमा भने ड्रग्सको नसाको नै प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ ।
मैले लागूऔषधको समस्यामा परेका सैयौँ व्यक्तिहरूको उपचार गरेँ । त्यस क्रममा मैले के थाहा पाएँ भने उनीहरूले नसाका अवस्थामा विभिन्न प्रकारका सानाठूला अपराध गरेकै हुँदा रहेछन् । कति अपराध घरभित्र मात्र सीमित हुन्छन् भने कति बाहिर सार्वजनिक भएका पनि पाएको छु । ड्रग्समा परेकै कारण उनीहरूलाई अपहरण, लुटपिट, गुण्डागर्दी आदिमा प्रयोग गरिएका उदाहरणहरू प्रशस्त देखिएका छन् । लागूऔषधको समस्यामा परेका व्यक्तिहरूको उपचारकर्ता भएको हैसियतले मलाई के लाग्छ भने नसाको सुरमा गरेको हर्कतका लागि पारसलाई सजायभन्दा पनि उपचार तथा पुनस्र्थापनाको आवश्यकता छ ।
आज हामीले पूर्वयुवराज पारसको विगतको जीवनलाई पनि एकपटक संवेदनशील भएर हेर्न जरुरी छ । उनी दरबारमा जन्मे । जन्मँदै उनी कानुनभन्दा माथि रहे । सानै उमेरमा नसालु चिजको सेवनमा परे र उनको ज्यादै धेरै बौद्धिक विकास पनि हुन सकेन । उनले गरेका लापर्बाहीहरूलाई कानुनले छोएन, त्यसैले उनले सधैँ कानुनलाई आफूभन्दा तलको कुराका रूपमा बुझ्दै आए । केटाकेटी हुँदा नै सेनाप्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, मुख्यसचिव, सभामुख र प्रहरीप्रमुखले सलाम र नमस्कार गरेको देख्दा उनलाई लाग्यो देशका सबै नेता र कर्मचारीहरू उनका नोकरसमान हुन् । दरबारमा सधैँ हुने छलफलमा यो मुलुक उनको पुर्खाले बनाएको मुलुक हो, र जनता रैतीसमान हुन् भन्ने चर्चाले उनलाई जनताप्रतिको डर पनि रहेन । बुबा ज्ञानेन्द्रले कमाइदिएका अथाह सम्पत्ति र पुस्तौँपुस्ताबाट आएको अपुतालीका साथै प्रभुशम्सेर राणाको सम्पत्तिसमेत आफैँमा थपिन आएपछि पारसलाई लाग्यो, धनले जे पनि गर्न सकिने रहेछ । पारसका वरिपरि रहने समूह पनि बौद्धिक रहेनन् । झन् बीचमा उनी युवराज भएर भावी राजासमेत बन्ने भएपछि उनको आँट झन् बढ्यो । पूर्वयुवराज भइसक्दा पनि उनको निवासमा सेनाको तैनाथी हुने र बाटोमा हिँड्दा स्कर्टिङ गरिनुले उनलाई आफू पूर्वयुवराज भएको महसुस नै हुन दिएन । त्यसमाथि उनलाई तराईतिर जाँदा वरिपरि गुन्जेको राजपरिवारको जय जयकारले थप भ्रमित पार्‍यो ।
एकातर्फ विभिन्न परिस्थितिले उनले आफूलाई अझै राजकीय शक्तिमै रहेको महसुस गर्दै रहनु र अर्कोतर्फ हतियार बोकेर नसालु चिज लिनु, यी दुवै कुराको सामन्जस्य नै यो घटनाको आधार बन्न पुग्यो । विगतमा झैँ यसपटक पनि उनले गरेको उद्दण्ड कार्य नसाकै सुरमा भएको छ । जबजब उनी नसामा हुन्छन्, तबतब उनीबाट गल्ती हुने गरेको इतिहास छ । उनको गल्तीको स्रोत नै नसालु चिज हुने गरेको छ । अतः पारसको अहिलेको सुधार भनेको जेल, यातना, कानुनभन्दा पनि नसालु चिजबाट उनलाई उन्मुक्ति दिने उपचारात्मक व्यवहार उचित हुनसक्छ । यदि नसालु चिजवस्तुबाट उनले उन्मुक्ति नपाए भविष्यमा पनि उनीबाट यस्ता गल्ती भइनै रहनेछन् । हाल पारसबाट भएको घटना नियोजित र नियतवशभन्दा पनि परिस्थितिजन्य बढी देखिन्छ । यो परिस्थितिमा उनलाई पुर्‍याउने प्रमुख जिम्मेवार नै ड्रग्स हो । त्यसैले जसरी नसामा रहेको मानिसले गरेका गल्तीहरूलाई हामी ज्यादै संवेदनशील रूपमा लिँदैनौँ, त्यसैगरी यस अवस्थामा पारसप्रति आक्रमक होइन, दयाभाव देखाउनु न्यायोचित हुन्छ । यदि समयमै पारसलाई नसाबाट निकाल्न केही ठोस कदम चालेको भए सायद उनको परिवारले आज यो दिन देख्नुपर्थेन होला । त्यसैले मेरो विचारमा अहिलेको परिस्थितिमा पारसबाट भएको लापर्बाही वा अपराध नसाको सुरमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको हो भनेर हामीले बुझिदिनुपर्छ । गोली चलाएर अमेरिकाका राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने अपराधीलाई समेत अदालतले सजाय नदिई परिस्थिति अध्ययन गर्न लगाएका घटना छन् । पारसलाई अहिलेको दुव्र्यवहारका लागि कार्बाही नै गर्नुहुँदैन भन्ने मान्छे होइन । तर, मेरो अहिलेसम्मको अनुभवले यही भन्छ, उनलाई जेलनेलको सजायभन्दा पनि नसालु चिजवस्तुबाट टाढा राख्न उपचार तथा पुनस्र्थापनाको जरुरत छ ।